Kungenzeka yini ukuthi ucabange ukuthi ngaphansi kwegama elinzima kangaka, elingavamile nelinye elimangazayo imbali enhle emndenini wamaLyutikovs ingafihla? Noma yimuphi umbhede wembali, umhlobiso wangempela uzoba yiRununculus. Ukutshala nokunakekela le ntombazane emangalisayo akuyona neze inkimbinkimbi, futhi ngisho ne-floriculturist yokuqala angayenza. Kunezinhlobo eziningi zezitshalo zalesi sitshalo, ezihlukene phakathi kwazo ukuphakama kwesitshalo, ukuma nombala we-inflorescences. Kuye ngezinhlobonhlobo, i-Ranunculus ifana nama-roses angewona ahlakaziwe, ama-poppies aseMpumalanga, ama- pomponiform dahlias noma ama-chrysanthemums e-globular.
Lezi zitshalo ezincane ezinhle zizoba umhlobiso wangempela we-flowerbed, ngosizo lwabo ungenza ama-curbs amahle. Ngakho-ke, abaningi abalimi bezimbali bayazibuza ukuthi bangahlwanyela kanjani iRununculus, ukuze athokoze ngezimbali zakhe bese ehloma ensimini. Ngokuvamile zonke izinhlobo zihlukaniswe ngamaqembu amakhulu amabili: ama-Asian namaPheresiya. Ngeqembu eliphakathi, kungcono ukukhetha okuqala, ngoba banamakhaza amaningi, nakuba bengabusika.
Ezindaweni ezibandayo nezomthunzi, iRununculus ihamba kahle. Ukutshala nokuhlengikaza kuyindawo yokufudumala nendawo engenamandla, nakuba abalimi abaningi bekwenzile baye baqinisekisa ukuthi izindawo ezihlanjululwe zezimbali azilimazi nganoma iyiphi indlela, kodwa ungakhohlwa ukuthi lesi sitshalo esithandayo ukushisa. Ukunisela kuyadingeka njalo, ikakhulukazi eshisayo, kodwa kufanele kube okulinganayo, akufanelekile ukuthululela inhlabathi.
Umhlaba okhanyayo, ongenalutho futhi onomsoco ulungele imbali enjalo njengoRununculus. Ukutshala nokunakekelwa kuhilela ukukhethwa kwendawo yasensimini ehlwanyelwe, nakuba inhlabathi ye-buttercup ayinxusa kakhulu, uma nje amanzi engadli. Ukunakekela lezi zimbali kulula futhi kuyaqondakala, akufani nokunakekelwa kwezinye izitshalo zezimbali. Kudingekile ukuhlanza ukhula, ukhulule inhlabathi, ngaphambi kokuqala nokuphela kwezimbali, engeza izithako ezenziwe ngamaminerali, ususe ama-inflorescences aphelile.
Kuye ngezinhlobonhlobo, kusukela ngo-May kuya ku-Agasti kuyoba phakathi nenyanga ukujabulela izimbali ze-Ranunculus. Ukutshala nokunakekela ama-rhizomes kuhilela ukufika kwawo embhedeni wembali entwasahlobo kanye nokucubungula ukugcinwa kokugcina ekupheleni kwehlobo. Uma ezindaweni eziseningizimu i-Ranunculus isengaphezu kwama-leaf in fall, khona-ke ezimweni zezulu zesikhumba esiphakathi ngeke zisinde. Lapho nje isihlahla sikhula, amaqabunga aphuzi bese ewela emhlabathini, izilimo eziyizigaxa kufanele zihlungwe ngokucophelela. Ama-rhizomes okuqeda ukuqubuka awela ngaphansi kwesisombululo se-potassium permanganate imizuzu engama-20, abomile futhi agcinwe emasakeni esikhwameni noma ku-sawdust ekushiseni okungenakufika kuka-6 ° C.
Ngentwasahlobo, izilimo eziyizigaxa zihlushwa ngobusuku obuningi kwisisombululo esithuthukisayo futhi zitshalwe endaweni evulekile. Yenza lokhu ngoMeyi, lapho sekufudumala futhi umhlaba uvuselela. Imbali iveza imbewu kanye nendodakazi yezilimo eziyizigaxa, ezihlukaniswa nabantu abadala futhi zigcinwe ebusika ngaphansi kwezimo ezifanayo. Ukungathobeki nobuhle balezi zitshalo kudonsela abacimi abaningi. Batshalwe emaqenjini ama-flowerbeds ngamaqembu, behlanganisa izinhlobonhlobo ezahlukene, ngaleyo ndlela bathole i-carpet ekhanyayo neyenama-mottled. Isiqephu seRununculus siyoba umhlobiso wangempela ekamelweni lokuphumula, izimbali zigaxe ngesonto elilodwa futhi zingalahlekelwa ubuhle bazo bemvelo.